Public Health in Myanmar: July 2007
Availability = ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ခြင်း
Accessibility = လူတိုင်းသွားရောက်ကုသနိုင်ခြင်း
Affordability = မိမိတတ်နိုင်သော ငွေကြေးပမာဏသာ ကုန်ကျခြင်း
Psychological barrier = စိတ်တွင်းအတားအဆီး
Physical barrier = နေရာဒေသအတားအဆီး
Administrative barrier = အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအတားအဆီး
Financial barrier = ငွေကြေးအတားအဆီး
NGO (Non-Governmental Organization) = လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း
National Health Plan = အမျိုးသား ကျန်းမာရေး စီမံကိန်း
National Health Policy = အမျိုးသား ကျန်းမာရေး မူဝါဒ
Primary Health Care = ပဏာမ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု
National Immunization Days = အမျိုးသား ကာကွယ်ဆေးတိုက်နေ့များ
National Sanitation Week = အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင် ရက်သတ္တပတ် လှုပ်ရှားမှု
Labels: Definition, Public health
Posted by စိုးထက် - Soe Htet ! 1 comments
These are the proposed areas of public health to be posted on this joint-blog.
1. behavior change communication
5. health policy and management
8. population and reproductive health
Labels: Introduction, Public health
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
လွယ်မယောင်နှင့်ခက်၊ တိမ်မယောင်နှင့်နက် ဆိုသကဲ့သို့ အမေးလွယ်၍ အဖြေ ခက်လှသည်။ ပညာရှင်များက တစ်မျိုးတစ်ဖုံစီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြသည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပုံ အချို့ကို ကြည့်ကြပါကုန်။
ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ခြင်း
အစိုးရ၏တာဝန်တစ်ရပ်၊ အထူးသဖြင့် မတတ်နိုင်သူများကို အခမဲ့ဆေးကုပေးခြင်း
ရောဂါကာကွယ်ခြင်း၊ လူ့သက်တမ်းကိုရှည်စေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း စသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်သော သိပ္ပံနှင့် ၀ိဇ္ဇာ ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပညာရပ်
ပြည်သူအများ ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးခြင်း
လူတစ်ဦး သို့တည်းမဟုတ် လူအများ ကျန်းမာစွာဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန်မှာ အချက်အလက်ပေါင်း များစွာအပေါ် မှီတည်နေပေသည်။ ထိုအချက်အလက်ပေါင်းများစွာ နှင့် ဆက်စပ်သော ကိစ္စမှန်သမျှသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ယေဘူယျ ဆိုနိုင်ပေသည်။ မည်သို့သော အချက်အလက်များနည်း။ အာဟာရပြည့်သော အစားအစာ နှင့် ရေကောင်းရေသန့် ရရှိရေး၊ လေကောင်းလေသန့် ရှုရှိုက်နိုင်ရေး၊ ရောဂါပိုးမွှားများ ကင်းစင်ရေး၊ ရောဂါကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံခွင့်ရရေး၊ နေထိုင်မကောင်းပါက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆေးကုသခွင့်ရရေး စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လေထုထဲတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓါတ်များ နေခြင်းသည်၎င်း၊ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာမရရှိခြင်းသည်၎င်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် အလုပ်သမားများ ဘေးကင်းရန် စီစဉ်ထားမှုမရှိခြင်းသည်၎င်း၊ ခုခံကျရောဂါသည်များကို ၀ိုင်းကျဉ်ထားခြင်းသည်၎င်း၊ လူနာများကို ဆေးကုသမှုမပေးနိုင်ခြင်းသည်၎င်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ အိမ်တွင်သာ မီးဖွားရခြင်းသည်၎င်း၊ ဆူနာမီ သတိပေးစနစ်မရှိခြင်းသည်၎င်း၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်ခွင့်မရခြင်းသည်၎င်း၊ လူတိုင်းလူတိုင်း၏ ကျန်းမာရေး ကို အခြေခံ ဥပဒေက ကာကွယ်မှု ပေးမထားခြင်းသည်၎င်း၊ ပြည်သူများ အခြေခံပညာမတတ်ခြင်းသည်၎င်း၊ ဆည်မြောင်းများဆောက်လုပ်သဖြင့် ငှက်ဖျားရောဂါ ပိုမိုထူပြောလာခြင်းသည်၎င်း၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ပေါများလာခြင်းသည်၎င်း၊ နျူကလီးယား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လူနေသိပ်သည်းသည့် နေရာတွင်ထားရှိခြင်းသည်၎င်း အစရှိသည့် နေ့စဉ် နေမှုထိုင်မှု ကိစ္စရပ်များသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နှင့် ဆက်ဆိုင်သည်ဟု ပြောဆိုရနိုင်ပေသည်။
ခြုံငုံပြောရလျင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဆိုသည်မှာ လူအများစုဝေးနေထိုင်ကြရာတွင် ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည့် စနစ်တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေး ဆိုသည်ကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက ဤသို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုလေသည်။
ကျန်းမာရေး ဆိုသည်မှာ အနာရောဂါ ကင်းစင်ရုံမျှသာမကပဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာခြင်း အပြင် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အဆင်ပြေစွာ နေထိုင်နိုင်ခြင်းတို့ကို ခြုံငုံခေါ်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Public Health: What is and how it works. 3rd Ed. Bernard J. Turnock.
Labels: Definition, Introduction, Public health